Ahoana ny famonosana ny fanomezana Krismasy ho fampisehoana tsara kokoa | Famoronana an-tserasera
Judith Murcia | | Inspiration, maro
Araka ny efa fantatrao, ny lalana misy antsika manolotra vokatra, sakafo na zavatra hafa mitaona ny fiheverantsika tsara na ratsy. Ny fiheverana voalohany dia ny, amin'ny tranga maro, dia zava-dehibe kokoa noho ilay fanomezana mihitsy. ny "as" afaka mihoatra "inona".
Raha mijery marika maro ianao raha tsy ny ankamaroany, mandany ampahany amin'ny teti-bolan'izy ireo amin'ny fonosana sy izay rehetra milaza izany. Miresaka ny fampiasam-bola ataon'izy ireo amin'ny fikarohana, famolavolana ary famokarana izahay.
1 Manolora fanomezana voafono tsara
2 Ahoana no hahazoako fonosana na fampisehoana tsara?
3 Mampiasà boaty ho fonosana fanomezana
4 Ho antsika izay manome tapakila na tapakila: valopy manokana
5 Kitapo taratasy manintona
6 Harona wicker ho an'ny fanomezana vondrona
Manolora fanomezana voafono tsara
Tokony hieritreritra kely kokoa toy ny mari-pamantarana sy hanome ny fanomezam-pahasoavana ny lanjan'izany mendrika azy io isika. Midika izany fa tsy maintsy atao izany miasa izahay ny fampisehoana, rehetra miampy ny antsipiriany. Ny zavatra voalohany tokony hialana dia ny taratasy fanomezana tsy dia misy kalitao, izay tsy manome antsika na inona na inona, afaka esoriny aza. Reraka sy mandatsa-dranomaso izy ireo manome endrika tsy misy dikany ny fonosanay.
Ahoana no hahazoako fonosana na fampisehoana tsara?
Manome anao ny valiny ato amin'ity lahatsoratra ity izahay, ary milamina satria manana karazan-karazany rehetra izahay:
Zavatra lehibe sy kely.
Fanomezana miaraka amin'ny Vokatra marobe.
Tapakila na tapakila ho an'ny seho sasany.
Fonosana ho an'ireo manana be dia be fotoana.
Maneho hevitra ho an'ireo izay tsy afaka mampiasa fotoana be na tsy manana fahaizana asa tanana.
Mampiasà boaty ho fonosana fanomezana
Afaka mampiasa boaty isika mba hiarovana ny fanomezana, ary raha ny tena izy, ny zavatra rehetra dia mitovy akanjo sy kanto kokoa. Ary koa, raha manana zavatra maro ny fanomezam-pahasoavantsika, dia fomba iray tsara hanangonana azy ireo. Ity fomba ity dia manampy antsika koa raha tsy manam-potoana firy isika, na dia afaka manokana fotoana sy mamita azy bebe kokoa aza isika. Andao jerena ny hevitra vitsivitsy mba ho folo ny boaty.
Afaka ataontsika afa-po amin'ny fanaratsiana taratasy o plastika. Safidy iray hafa ny fampiasana taratasy hozatra, dia karazan-taratasy tena maivana sy mahia. Ny tombony lehibe, amin'ity tranga ity, dia ny tena izy mora karakaraina. Ireo fitaovana rehetra azonao atao mividy en tsena an-tserasera na na aiza na aiza fitaovana o bazaar.
Manome loko bebe kokoa ary ny fivelomana dia mametraka ny sasany vatomamy o vatomamy. Afaka mihoby mihitsy aza isika pompona miloko. Andao haka a mameno vokany, izany hoe, feno kokoa io. Ny hevitra dia hoe rehefa manokatra ilay boaty ilay olona mahazo ilay fanomezana dia manana izy ireo fahatsapana fa tena feno izany. hita maso handresy, dia ho hita fa miasa, feno ary mahatalanjona.
Ho antsika izay manome tapakila na tapakila: valopy manokana
Raha taratasy ny fanomezana anao satria efa nanao pirinty ny tapakila handeha ho any amin'ny teatra, baolina kitra na hetsika hafa ary hataonao ao anaty a amin'ny fisaka sy mankaleo, mamporisika anao izahay hamaky hatrany satria izao Mandeha ianao a mahaliana.
Aza milamina amin'izany ary fonosiny mba hifanaraka amin'ny fanomezana nataonao. Azon'izy ireo atao ny mamadika ny valopy ho lasa zavakanto. Ho an'ireo daty ireo dia azonao atao ovay ho lasa kisary na toetra Krismasy ny valopy. Mamela hevitra vitsivitsy ho anao izahay, ary tsy reraka ny mamerina fa misy amin'ny tranga rehetra. Ohatra tsotra y ny hafa kosa mamelabelatra kokoa ho an'ireo izay manam-potoana sy mankafy asa tanana. Lasa izao!
Ireto valopy ireto dia vita tanana. Hampiasa karatra misy loko isan-karazany izahay, izay tsy maintsy hofaranay hanomezana azy ny endrika mety hametahana azy ireo amin'ny fomba izay hahazoantsika endrika Krismasy samihafa. Amin'ity tranga ity dia asehonay anao serfa. Mora atao izy ireo, satria raha mividy isika valopy volontany, mila mamita izany amin'ny antsipiriany roa fotsiny isika:
tandroka amin'ny loko volontsôkôlà misy volony hafa noho ny valopy. Raha sendra volontany mainty ny valopy, dia hampiasa feo malefaka kokoa ho an'ny tandroka sy ny mifamadika amin'izany isika.
ny maso Hamboarinay amin'ny baoritra fotsy izy ireo ary zahana ho faritra. Ao anatin'izy ireo dia hasiantsika boribory kely kokoa misy loko hafa. Azontsika atao koa ny manintona azy ireo amin'ny marika.
La Orona mena Io no fikitika an'ohatra an'io toetra io. Hametraka izany amin'ny flap triangular aoriana isika.
Hevitra iray hafa, izay eritreretiko manokana tena original, dia ny mamerina ny akanjo santa claus o Dadabe Noely. Mbola bebe kokoa aza mora noho ny ambony. Amin'ity tranga ity dia hividy izahay valopy mena. Hanapaka ny volo mainty izahay mba hamerenana ny fehin-kibo ary toradroa volamena ho an'ny jaigrafy. Mametaka azy izahay ary efa manana valopy mamorona sy Krismasy. Afaka hitantsika araka ny hitantsika eo amin'ny sary manoratra el Nombre an'ny olona izay handray ny fanomezana eo afovoany.
Podemos handravaka ny valopy amin'ny haingon-trano na ny Krismasy endri-tsoratra. Manana ny Safidy hisintona azy ireo na manaova firaketana amin'ny baoritra, na misintona sary avy amin'ny Internet ary apetaho. dia haingana be ny fampisehoana ary ny vokany, araka ny hitantsika amin'ny sary, dia tsara.
Ary azo antoka ny safidy tadiavina indrindra dia ho avy eo. Ho an'ireo rehetra izay tsy manam-potoana ampy ianao na tsy mahay manao asa tanana ianao. IRETO azo alaina ny valopy, noho izany, tsy mila miresaka fotsiny ianao amin'ny adiresy izay ho hitantsika etsy ambany y misintona modely. Manonta, manapaka ary apetaho. Hanome toky anao izy a endrika kanto sy natoraly.
Link Misy video an'i Santa Claus.
Link Misy video Snowman.
Kitapo taratasy manintona
Raha mividy fanomezana amin'ny magazay izahay dia homeny kitapo misy marika ivelany. Manoro hevitra anao izahay hanolo ny kitapo ho an'ny iray mety kokoa amin'ny Daty noely.
Betsaka ireo kitapo voaravaka miaraka amin'ny motera Noely azontsika atao mividy vita, fa raha te hanisy marika ny tenanao ho fanomezana DIY tsara ianao dia afaka manao izany handravaka kitapo tsotra ny tenanao. Mila mividy kitapo taratasy volontsôkôlà ianao mandritra ny androm-piainany ary avelao hisidina ny eritreritrao. Azonao atao ny mampihatra hevitra vitsivitsy avelanay hanao karatra paositra Krismasy amin'ireo harona. miditra eto handeha ho any amin'ny paositra.
Ity dia ohatra tsotra iray izay hitantsika teo aloha mba hanaovana cartes postales. Momba izany hanova ny kitapo ho tavan'i Dadabe Noely. Araka ny hitanao dia azonay ampiharina amin'ny maro izany endrika hafa:
Harona wicker ho an'ny fanomezana vondrona
Raha manana zavatra maro isika toy ny fanomezana, ary tsy fantatsika ny fomba fanangonana azy ireo dia afaka mamorona harona isika. Amin'ny alàlan'ny Noely. Ny hevitra dia mijanona ny zava-drehetra napetraka tsara ka tsy mampihetsika antsika ary tsara tarehy. Azontsika ampiasaina, toy ny amin'ireo boaty, a fenoy ny any ambadika. Apetrakay amin'ny fomba stratejika ireo zavatra rehetra, ary farany dia fonosinay a taratasy mangarahara izay mamela antsika hahita ao anatiny.
Farany, hamatotra kofehy isika. Afaka manampy a Lazo na baolina (izay ahantonantsika amin'ny hazo) mba hanomezany azy Krismasy hikantona ny tag miaraka amin'ny anaran'ny mpandray.
Raha hitantsika fa ny anatiny dia foana tokoa isika, afaka mametraka sasany isika Saribakoly Krismasy na a nougat for apetraho ny sobika ary omeo mikasika ny Noely bebe kokoa izy.
Ny tsy fahampian'ny hevitra dia tsy fialan-tsasatra amin'ity Krismasy ity hanolotra ny fanomezanao amin'ny fomba tsara indrindra. TRATRY NY KRISMASY!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny famonosana fanomezana Krismasy